AMAQEMBU AQUBUKA KU-ANC AKULUNGELE UKULWA IZIMPI | Scrolla Izindaba
AMAQEMBU AQUBUKA KU-ANC AKULUNGELE UKULWA IZIMPI
Isikhathi sobuwula se-ANC sesifikile manje njengoba iqembu selimemezele amalungiselelo engqungquthela yalo yaphakathi nonyaka.
Kepha ukulwa kwamaqembu amancane ku-ANC sekuqalile.
Uhlangothi likaZuma lisebenza ngenkuthalo iswini lokubuya elizibhekise ekuwineni izingqungquthela eziningi zezifunda, ezizobanjwa phakathi kwamanje noNdasa kowezi-2021.
Lokhu kubalulekile, ukunquma ukuthi iziphi izithunywa ezizoya eMkhandlwini Kazwelonke (i-NGC).
I-NGC ye-ANC iza ezinyangeni ezingama-30 ngemuva kwengqungquthela yokukhetha ubuholi kodwa kulokhu izoba semuva ngezinyanga eziyisishiyagalolunye uma izohlala ngoMbasa kowezi-2021.
Izithunywa ezingaphezu kweziyi-4,000 kulindeleke ukuthi zibe khona.
Le ngqungquthela kufanele ukuthi ibuyekeze inqubomgomo futhi yenzelwe ukwakha isu ngaphambi kokhetho oluzayo lohulumeni basekhaya.
Kepha kuzoba yini kodwa.
Eminyakeni edlule i-NGC ibisetshenziswa njengendawo yokulwa yamaqembu e-ANC alwela ukuphatha iqembu nohulumeni.
Abaholi abanezifiso kwezepolitiki ezikhundleni eziphezulu basebenzisa le nkundla njengengxenye yokwethula ukubukela phansi labo abasezikhundleni nokukhankasela umsebenzi ophezulu we-ANC.
Empeleni, iqembu likaZuma lisebenzisa isu elifanayo nalokho ebelikusebenzisa ngaphambi kwe-NGC kowezi-2005, lapho owayenguMengameli uThabo Mbeki ayelindele khona ukukholisa ingqungquthela ukuthi iphoqe uZuma ukuba ashiye isikhundla sakhe sokuba yiphini likaMengameli we-ANC.
UMbeki ubesanda kuxosha uZuma esikhundleni sakhe ngemuva kokuthi ethinteka ecaleni lenkhohlakala lowayenguMeluleki wakhe wezezimali uShabir Shaik.
Ngaleso sikhathi abalandeli bakaZuma babebambe imilindelo ebusuku ngaphandle kwezinkantolo ngaphambi kokuvela kukaZuma bashisa nezikibha ze-ANC ezinobuso bukaMbeki.
Bese basebenzela amagatsha ukuqinisekisa ukuthi uZuma uphethe ivoti ku-NGC kaNtulikazi kowezi-2005, lapho uhlelo lukaMbeki lanqatshwa khona, kwavula indlela kaZuma eya phezulu.
Ngokushesha kowezi-2020, umlingani omkhulu kaZuma uAce Magashule ubekwe icala lokukhwabanisa nenkohlakalo esigamekweni semali eyizigidi eziyi-R225 ze-asbestos.
Ukuvela enkantolo kumnika inkundla, njengoba benzela uZuma kowezi-2005, ukubhekana nezinkumbi zabantu nokucekela phansi igunya likaMengameli.
Kule nyanga, abalandeli bakaMagashule bashise izikibha ezinobuso bukaMengameli Cyril Ramaphosa, belingisa abalandeli bakaZuma kowezi-2005.
UMagashule uphumele obala waphika ukuthi unezifiso zokuba sesikhundleni esiphakeme ngendlela efanayo naleyo uZuma enza ngayo kowezi-2005.
Njengoba uZuma enza isithombe sokuthi amalungu e-ANC ayekulungele ukumkhokhela izindleko zakhe zomthetho, uMagashule uphakamise ukuthi abalandeli bakhe nabo bafake isandla ekukhokheleni ibheyili yakhe yemali eyizi-R200,000.
“Ngifuna ukubonga amaqabane afake isandla ekukhokheleni ibheyili yami. Ngiyabonga kakhulu maqabane. Ngifuna ukunibonga ngokusuka ekujuleni kwenhliziyo yami ngokuza lapha nokweseka i-ANC,” uyasho.
UMagashule nekamu likaZuma baya kwi-NGC ukuyofuna izithunywa zamagatsha ukuthi zivume ukwenqaba kwakhe ukwehla esikhundleni sakhe yize ebekwe amacala okukhwabanisa nenkohlakalo.
“Ngakhethwa ngamagatsha e-ANC. Kumele siye engqungqutheleni ekhethekile futhi amagatsha kufanele athi kimi ‘comrade Magashule, suka uye eceleni’.